japanese study | J-Myanmar
Posts in category japanese study
ဂျပန်​က တို့ အမေ​ရိ​ကား က တို့​လို့ ပြော​လိုက်​တာ​နဲ့ များ​သော​အား​ဖြင့် မြန်မာ​ပြည်​က သူ​တွေ​အနေ​နဲ့ အဲ​ဒီ​လူ​တွေ​ကို အလိုလို အထင်ကြီး​သွား​တတ်​တယ် ကျွန်တော်​တို့ ဘော်ဘော်​တွေ ရပ်​ကွက်​ထဲ​က လက်ဖက်ရည်​ဆိုင်​မှာ​ထိုင်​ရင်း ဂျပန်​ရောက်​နေ​တဲ့ သူငယ်ချင်း​အကြောင်း​ပြော​ရင်း သူ့​ဘဝ​ကို အရမ်း​အားကျ​ဖူး​တယ် နောက် တစ်​ကောင်​က ဂျပန်​စာ​ကျောင်း​တွေ တက်​ပြီး ဂျပန်​သွား​ဖို့ လုပ်​နေ​တုန်း​က​လည်း ဂျပန်​မ​ပြော​နဲ့ ပုဂံ​တောင် မ​ရောက်​ဖူး​တဲ့ ကိုယ် .. သူငယ်ချင်း​အတွက် ဝမ်းသာ​တယ် ဂုဏ်​ယူ​တယ် ပြော​နေ​ပေ​မယ့် စိတ်​ထဲ​တော့ အားငယ်​ခဲ့​ဖူး​တယ် အမှန်​ဆို ကိုယ့်​ပြည်​တွင်း​မှာ လုပ်ကိုင်​စား​သောက်​ရင်​လဲ ကြီးပွား​နိုင်​ပါ​တယ် ဘာ​ကြောင့် ဒီ ဂျပန်​ရောက်​နေ​တဲ့ သူ​တွေ သွား​နေ​တဲ့ သူ​တွေ​ကို အားကျ အထင်ကြီး​နေ​ရ​တာ​လဲ ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲဆို​ပြီး …
ဂျပန်​သို့ Training Visa ဖြင့်​လာ​ရောက်​ရန်​ကြိုးစား​နေ​သူ​များ​အတွက် သိ​သ​လောက် ပြန်လည်​ရေးသား​ဝေမျှ​ပါ​မည် Training Visa ဆို​တာ ဂျပန်​လို ဂျိ​ရှူး​ဆေး လို့ ခေါ်​တဲ့​အလုပ်​သင်​ဝန်​ထမ်း​အနေ​ဖြင့် နှစ်​တို​ဗီဇာ​နေထိုင်​ခွင့် နဲ့ လာ​တဲ့ အလုပ်​အမျိူး​အစား​ဖြစ်​ပါ​တယ်.. စက်​ရုံ​အလုပ်​သမား၊ထမင်း​ဘူး​စက်​ရုံ စိုက်ပျိုး​ရေး၊ဆောက်​လုပ်​ရေး အလုပ်​သမား​အနေ​နဲ့ အစ​ရှိ​သ​ဖြင့်​အမျိုး​မျိုး…..အလုပ်​သမား​အဖြစ် သုံး​နှစ် အလုပ်​လုပ်​ခွင့်​ရ​ရှိ​နိုင်​ပါ​တယ် မှတ်ချက် ဂျပန်​မှာ သုံး​နှစ်​ထက်​ပို​နေ​၍​မ​ရ​ပါ စာချုပ်​သက်​တမ်း​ပြည့်​လျှင်​ဗီဇာ​ထပ်​တိုး​၍​မ​ရ​ပါ သုံး​နှစ် စာချုပ်​ပြည့်​လျှင် မ​ပြန်​၍​မ​ရ​ပါ.. အဲ့​လို​အလုပ်​အမျိုး​အစား​နဲ့​လာ​မယ်​ဆို​ရင် အစိုးရ သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ တရားဝင် သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ ဝန်​ဆောင်​ခ နှူန်း​ထား​ဟာဒေါ်​လာ သုံး​ထောင် မြန်မာ​ငွေ​သိန်း​သုံး​ဆယ် တရားဝင်​သတ်​မှတ်ထား​ပါ​တယ် သို့​ပေ​မဲ့ တချို့​အေး​ဂျန့်​တွေ​ဟာ ဝန်​ဆောင်​ခ သိန်း​ငါး​ဆယ်​က​နေ ရှစ်​ဆယ်​ထိ အဆ​မတန်​တောင်း​ပြီး ဝန်​ဆောင်​ခ​တွေ ပို​ယူ​တတ်​ကြ​ပါ​တယ် တချို့​ကျ​တော့​လည်း မြန်မာ​ပြည်​မှာ …
ဘာသာ​စကား​နှစ်​မျိုး တတ်မြောက်​ခြင်း​သည် ကွဲပြား​ခြား​နား​သော လူ​အမျိုး​မျိုး၊ ယဉ်ကျေး​မှု​အမျိုး​မျိုး​နှင့် စိတ်​ခံစား​ချက်​အမျိုး​မျိုး​တို့​ပါရှိ​သော ကမ္ဘာ​အသစ်​တစ်​ခု​ကို သွား​ရောက်​ရန် သင့်​ကို လမ်း​ဖွင့်​ပေး​မှာ​ပါ။ ဒီ​လို​တတ်မြောက်​ဖို့​ကို အချိန်​တွေ​လည်း အများ​ကြီး​ပေး​ဆပ်​ရ​ကောင်း ပေး​ဆပ်​ရ​မှာ​ပါ။ ဒါပေမဲ့ လူ​အများ​စု​ကတော့ ဒီ​လောက်​များပြား​လှ​တဲ့ အချိန်​တွေ​ကို မ​ပေး​နိုင်​ကြ​ပါ​ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီ​လို​တတ်​ကျွမ်း​ဖို့​က ရက် (၉​၀) တည်း ကြာ​တယ်​ဆို​ရင်​ရော ဘယ်​လို​လဲ? ပထမ​ဆုံး ဘာသာ​စကား (၂) မျိုး တတ်မြောက်​ခြင်း​၏ အကျိုး​ကျေးဇူး​များ​ကို သုံးသပ်​ကြည့်​ရအောင် ဒုတိယ​ဘာသာ​စကား​ကို သင်​ယူ​တဲ့​အတွက် သိသာ​ထင်ရှား​လှ​တဲ့ အကျိုး​ကျေးဇူး​တွေ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ဥပမာ – အယ်(လ)ဇိုင်း​မား​ရောဂါ​ဖြစ်ပေါ်​မှု​ကို နှောင့်နှေး​စေ​ခြင်း၊ ဦးနှောက်​ရဲ့ စွမ်းအား​ကို မြှင့်​တင်​ပေး​ခြင်း၊ အာရုံ​စိုက်​နိုင်​စွမ်း ပို​ကောင်း​စေ​ခြင်း​နဲ့ အာရုံ​အနှောင့်​အယှက်​ဖြစ်ပေါ်​စေ​တဲ့ အရာ​များ​ကို​တောင်​မှ ဖယ်ရှား​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဒီ​လို​သိသာ​တဲ့ …
phyo, Mar 13, 2015
တက္ကသိုလ် ပညာသင်​နှစ် (၄ နှစ်) မြန်မာ​လူ​မျိုး​များ​အသွား​များ​တဲ့​တက္ကသိုလ် ဘာသာ​ရပ်​တွေ ကတော့ ၁.経済学部、経営学部 စီးပွား​ရေး business management နဲ့​ဆိုင်​သော​ဘာသာ​ရပ်၊ ၂. 国際関係学部နိုင်ငံ​တကာ ဆက်ဆံ​ရေး ဘာသာ​ရပ် ၃.ယဉ်ကျေး​မှု ဘာသာ​ရပ် ၄.教育 ပညာ​ရေး​နှင့်​ဆိုင်​သော ဘာသာ​ရပ်​တို့​များ​ပါ​တယ်။ ထို​အထဲ​က​မှ နာမည်ကြီး​တက္ကသိုလ်​တွေ​၏ ကျောင်း ဝင်​စာ​မေး​ပွဲ​သည် ခက်ခဲ​ပြီး ၊အရည်အချင်း သတ်​မှတ်ချက်​တွေ​များ ပါ​တယ်။ (ခြွင်း​ချက် တချို့​နာမည် သိပ်​မ​ရှိ​တဲ့​တက္ကသိုလ်​တွေ​ဆို​ရင်​တော့ သတ်​မှတ်ချက်​တွေ​သိပ်​မ​များ​ဘဲ ဂျပန်​စာသင်ကျောင်း​ရဲ့ ကျောင်း​တတ်​ရာ​ခိုင်​နှုန်း ၈​၀ ကျော် နှင့် ပိုက်ဆံ​သွင်း​နိုင်​လျှင် သတ်​မှတ်​အရည် အချင်း ပြည့်​မီ​လျှင် ကျောင်း​လျှောက်​လို့​ရ​တာ​များ​ပါ​တယ်။) ယခု​မိမိ​ပြော​မည့်​အကြောင်းအရာ သည် တ​ကျောင်း​နှင့်​တ​ကျောင်း​သတ်​မှတ်ချက် မ​တူသော်​လည်း​များ​သော​အား​ဖြင့်​သတ်​မှတ်​သော　Standard Status ကို​ပြော​မှာ​ဖြစ်​ပါ​မယ်။ ၁။တက္ကသိုလ်​ဝင်​ခွင့်​အတွက် …
ဂျပန် Training Visa
Training Visa ဆို​တာ ဂျပန်​လို ဂျိ​ရှူး​ဆေး လို့ ခေါ်​တဲ့​အလုပ်​သင်​ဝန်​ထမ်း​အနေ​ဖြင့် နှစ်​တို​ဗီဇာ​နေထိုင်​ခွင့် နဲ့ လာ​တဲ့ အလုပ်​အမျိူး​အစား​ဖြစ်​ပါ​တယ်.. စက်​ရုံ​အလုပ်​သမား၊ထမင်း​ဘူး​စက်​ရုံ စိုက်ပျိုး​ရေး၊ဆောက်​လုပ်​ရေး အလုပ်​သမား​အနေ​နဲ့ အစ​ရှိ​သ​ဖြင့်​အမျိုး​မျိုး…..အလုပ်​သမား​အဖြစ် သုံး​နှစ် အလုပ်​လုပ်​ခွင့်​ရ​ရှိ​နိုင်​ပါ​တယ် မှတ်ချက် ဂျပန်​မှာ သုံး​နှစ်​ထက်​ပို​နေ​၍​မ​ရ​ပါ စာချုပ်​သက်​တမ်း​ပြည့်​လျှင်​ဗီဇာ​ထပ်​တိုး​၍​မ​ရ​ပါ သုံး​နှစ် စာချုပ်​ပြည့်​လျှင် မ​ပြန်​၍​မ​ရ​ပါ.. အဲ့​လို​အလုပ်​အမျိုး​အစား​နဲ့​လာ​မယ်​ဆို​ရင် အစိုးရ သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ တရားဝင် သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ ဝန်​ဆောင်​ခ နှူန်း​ထား​ဟာဒေါ်​လာ သုံး​ထောင် မြန်မာ​ငွေ​သိန်း​သုံး​ဆယ် တရားဝင်​သတ်​မှတ်ထား​ပါ​တယ် သို့​ပေ​မဲ့ တချို့​အေး​ဂျန့်​တွေ​ဟာ ဝန်​ဆောင်​ခ သိန်း​ငါး​ဆယ်​က​နေ ရှစ်​ဆယ်​ထိ အဆ​မတန်​တောင်း​ပြီး ဝန်​ဆောင်​ခ​တွေ ပို​ယူ​တတ်​ကြ​ပါ​တယ် တချို့​ကျ​တော့​လည်း မြန်မာ​ပြည်​မှာ သိန်း​နှစ်​ဆယ်​လောက်​ယူ​ပြီး ဂျပန်​ရောက်​အလုပ်​လုပ်​မှ လခ​ထဲ​က အရစ်​ကျ ပြန်​ဖျက်​တာ​မျိုး​လုပ်​တတ်​ကြ​ပါ​တယ် ဘယ်လောက် …
"ဂျပန်​လူ​မျိုး​များ​ရဲ့ လက်ဆောင်​ပေး​ခြင်း အမျိုး​မျိုး​အကြောင်း သိ​ကောင်း​စရာ"
Oseibo နှင့် Ochugen လက်ဆောင် တစ်​နှစ်​မှာ နှစ်​ကြိမ်​ဖြစ်​သော ဒီဇင်ဘာ​လ နှင့် ဇွန်​လ​များ​တွင် မိတ်ဆွေ သူႈယ်​ချင်း​များ၊ လုပ်ဖော်​ကိုင်​ဖက်​များ၊ ဆွေ​မျိုး​များ​ဟာ အချင်းချင်း အပြန် အလှန် လက်ဆောင်​ပေး​ကြ​ပါ​တယ်။ ဒီ​လို ပေး​တဲ့ လက်ဆောင်​မျိုး​ကို Oseibo နှင့် Ochugen လို့​အသီ​သီးခေါ် ဆို​ပါ​တယ်။ ပျမ်းမျှ​အား​ဖြင့် ယမ်း ၅​၀⁠၀​၀ ခန့် သုံးစွဲ​ဝယ်​ယူထား​သည့် အစားအစာ၊ အရက်၊ အိမ်​တွင်း အသုံးပြု​ပစ္စည်း​များ အခြား​သော လက်ဆောင်​များ​ဖြစ်​ကြ​ပါ​တယ်။ ထို ရာသီ​ဟာ ကုမ္ပဏီ​ဝန်​ထမ်း​တွေ ဆု​ကြေးငွေ (Bonus) များ​ပေး​လေ့​ရှိ​တဲ့ ကာလ​နှင့်​လည်း တိုက်ဆိုင်​နေ​ပါ​တယ်။ Temiyage နှင့် Omiyage လက်ဆောင် ———————————————- တစ်​ဦး​တစ်​ယောက်​ကို …
အောက်တိုဘာ​လ​မှာ အာ​ရှ​စီးပွား​ရေး​ထိပ်​တန်း​နိုင်ငံ​ဖြစ်​တဲ့​ဂျပန်​ပြည်​ကို သွား​ရောက်​လေ့​လာ​ခွင့်​ရ​တော့​မည် ဖြစ်​၍ ကျွန်မ​သိတ်ပျှော်​နေ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ရာသီ​ဥတု​ကောင်း​တယ်​လို့​ဂူ​ဂဲလ်​က ဆို​ထား​လေ​တော့ ပါ​ရီ​က ဝယ်​လာ​တဲ့ Zara ဂါဝန်​တို⁠တို​လှ⁠လှ​လေး​တွေ​လည်း မ​မေ့​မ​လျှော့ ထည့်​ခဲ့​ပြန်​သေး​တယ်။ ဂျပန် ANA လေ​ကြောင်း​လိုင်း​ကို​ပထမ​ဦး​ဆုံး​စီး​ဖြစ်​ခဲ့​တယ်။ ည​ဖက်​စီး​ရ​တဲ့​အပြင် ခရီး​သွားဖော်​မြန်မာ​အေး​ဂျင့်​မှ​မိတ်ဆွေ​များ​နဲ့​စကား​ဖောင်​ဖွဲ့​နေ​ရ​၍ လေ​ယာဉ်​မယ်​လေး​များဖော်​ရွေ​သည်​ဟု အနည်းငယ်​မှတ်သား​မိ​သည်​မှ​လွှဲ​၍ ထူး​ထူးခြား​ခြား​သိတ်​မ​ရှိ​ခဲ့​ပါ။ လေ​ဆိပ်​ရောက်သော် ကား​အဆင်သင့်၊ဒ​ရိုင်​ဘာ​က​လည်း​ကျွန်မ​တို့​အိတ်​တွေ အကုန်​လုံး​ကြုံး​သယ်​ပေး​တော့ ဟန်ကျ​နေ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဂျပန်​လူ​မျိုး​များ​နှင့်​နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ​အလုပ်​လုပ်​နေ​သော သူငယ်ချင်း​က​လည်း ခရီး​လမ်း​တစ်​လျှောက် ဂျပန်​နိုင်ငံ​နှင့်​လူ​မျိုး​အလေ့​အထ​များ​ကို​တစ်ဖက်​က​ကွန်​ပြူ​တာ​နှင့် အလုပ်​လည်း​လုပ်​ရင်း ကျွန်မ​တို့​အား​လည်း ရှင်း​ပြ​ပါ​သေး​တယ်။ သူ​အလုပ်​လုပ်​တာ​ကို​ကြည့်​နေ​ရင်း​မှ အလုပ်​အလွန်​လုပ်​သူ​ဟု နံ​မည်​ကြီး​သော ဂျပန်​များ ကျွန်မ​လောက်​အလုပ်​လုပ်​သလား​ဆို​တာ​ကို​သိ​ချင်​စိတ်​ပျင်း​ပျ​မိ​သည်။ ကျွန်မ​အလုပ်​လုပ်​ချိန်​က (ဖေ့​ဘွတ်​ကင်း အချိန်​ပါ​ထည့်​ပေါင်း​တာ​ပေါ့နော်)စနေနေ့​အပါအဝင် တစ်​နေ့​ကို အနည်း​ဆုံး ၁​၀ နာရီ​ရှိ​တာ​ကိုး။ သည်လို​နဲ့ လမ်း​တစ်​လျှောက်​ကြည့်​လာ​ရင်း​ရုံးတက်​ဖို့​သွား​နေ​တဲ့​သူ​တွေ​ကို တွေ့​ရ​ပါ​တော့​တယ်။ အဆို​ပါ မြင်​ကွင်း​က ကျွန်မ​ကို …
japanese studyLife StyleStory
“နိုင်ငံ​ခြား​က ဘဝ​ဆို​တာ ရေသူ​မ​လေး​များ​ပမာ”
phyo, Dec 24, 2014
နိုင်ငံ​ခြား​သွား​ဖို့ နှုတ်ဆက်​ကန်တော့​တဲ့​အခါ လူကြီး​သူမ​တွေ ဆုံးမ​လေ့ ရှိ​ပါ​တယ်။ ကြိုးစား၊ ဇွဲ​မ​လျှော့​နဲ့၊ စိတ်​ဓာတ်​မ​ကျ​နဲ့ စ​သ​ဖြင့် ပြော​ကြ​ပါ​တယ်။ ဟုတ်​တယ်၊ ဒါ​တွေ​က အင်မတန် အရေးကြီး​ပါ​တယ်။ ခု​ကျနော် ပြော​မယ့်​အချက်​ကတော့ လူကြီး​တွေ ပြော​လေ့​ရှိ​တဲ့ စကားမ​ဟုတ်​ဘဲ ကျနော်​ကိုယ်တိုင် ဖြတ်​သန်း​ခဲ့​ရ​တဲ့ ဘဝ​ရဲ့ သင်​ခန်း​စာ​တ​ခု​ဖြစ်​ပြီး၊ ဘယ်​သူ့​ဆီ​က​မှ ကြား​ရ​မှာ မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ပြီး​တော့ နည်း​နည်း သိမ်မွေ့​လို့ တ​ခေါက်​ဖတ်​ရုံ​နဲ့ နားလည်​ချင်​မှ နားလည်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ကျနော် ဥပမာ​တွေ​နဲ့ အတတ်​နိုင်​ဆုံး ရှင်း​ပြ​ပါ​မယ်။ ကျနော်​တို့ ကိုယ့်​တိုင်း​ပြည်​မှာ ကိုယ်​နေ​ရင် သူ့​ဖာ​သာ အလိုလို အဆင်​ပြေ​နေ​ပြီး​သား ကိစ္စ​တွေ ရှိ​တယ်။ ဘာ​လုပ်​ချင်​ရင် ဘယ်​ကို​သွား၊ ဘယ်​သူ​နဲ့​တွေ့၊ ဘယ်လောက်​ပေး၊ ဘယ်​သူ့ လက်မှတ်ထိုး …
phyo, Dec 17, 2014
ဂျပန်​မူ​လီ​ဆို​တာ​တော့ ကြား​ဖူး​တယ် မဟုတ်​လား။ တခြား​မူ​လီ​တွေ​ထက် ဂျပန်​မူ​လီ​က အရစ်​ပို​ရှည်​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် ကိစ္စ​တ​ခု​ခု လက်​ပေါက်​ကပ်​ပြီး အရစ်​ရှည်​နေ​ရင် ဂျပန်​မူ​လီ​လို့ ပြော​ကြ​တယ်။ ဂျပန်​ကပ်​ကြေး​ကိုက်​ကတော့ ပုံစံ​တ​မျိုး​ပေါ့​လေ။ ကျနော် ဂျပန်​မှာ နေ​တုန်း​က တရက်​တော့ ဂျပန်​သူငယ်ချင်း တို​ယို​ကာ​ဝါ အကူအညီ​တောင်း​လာ​တယ်။ မြန်မာ​အစားအစာ​တွေ​ထဲ​မှာ “ယာ​ကိ​ဆိုး​ဘ” နဲ့​တူ​တာ ဘာ​ရှိ​သလဲ​တဲ့။ ယာ​ကိ​ဆိုး​ဘ​ဆို​တာ ပဲ​ငံပြာရည် ဆော့စ်​နဲ့ ကြော်​တဲ့ ဂျပန်​ခေါက်​ဆွဲကြော်​ပါ။ ကျနော်​တို့ မြန်မာ​ပြည်​မှာ တရုတ်​ခေါက်​ဆွဲကြော်​ပဲ ရှိ​တယ်။ မြန်မာ ခေါက်​ဆွဲကြော်​မ​ရှိ​ဘူး​လေ။ ရှမ်း​ခေါက်​ဆွဲ​လည်း ရှိ​တော့ ရှိ​တယ်၊ ဒါ​ပေ​မယ့် သူ​က အကြော်​မဟုတ်​ဖူး၊ အရည်​နဲ့ အသုပ်​ပဲ ရ​မယ်။ သူ့​ကို ပြော​ပြ​တော့ ထပ်​ပြီး စဉ်းစား​ကြည့်ပါ​ဦး​ကွာ​တဲ့။ တို​ယို​ကာ​ဝါ​က …